Taona amin'ny seranam-piaramanidina: Mandehana mankany amin'ny hubs amin'ny ho avy
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Taona amin'ny seranam-piaramanidina: Mandehana mankany amin'ny hubs amin'ny ho avy
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • Vaovao Mafana Espaniola • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Turkey Breaking News • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao Mafana Vietnam
Ny taona 2019 dia ho tsaroana ho taona nanokanana ireo seranam-piaramanidina stratejika lehibe sy kely hanomezana fahafaham-po ny fangatahana rivotra izay hipaka amin'ny 2035 - araka ny filazan'ny IATA - mpandeha an'habakabaka 8.2 miliara.
Amin'ny faran'ny taona, seranam-piaramanidina fito farafahakeliny hanokatra ny vavahady amin'ny vazan-tany samihafa.
Manomboka amin'ny seranam-piaramanidina Daxing vaovao any Beijing, ny seranam-piaramanidina nosoniavin'i Zaha Hadid izay tokony hanomboka hiasa eo anelanelan'ny volana jona sy septambra, dia eo amin'ny laharana voalohany amin'ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra eran-tany. Avy amin'ireo mpandeha 45 tapitrisa voalohany hikendreny hikirakira ny fifamoivoizana dia mety hahatratra olona 72 tapitrisa izany amin'ny taona 2025.
Manodidina ny 12 miliara dolara ny vidin'ny fotodrafitrasa ary ny filoha Xi Jinping no nirahin'ny taona 2014 hanamaivana ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Beijing Capital. Miaraka amin'ny làlambe fito, io no ivon-toeran'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka atsinanana sy ny Airlines Southern China.
Ny seranam-piaramanidina, miorina ao amin'ny faritra Hebei, dia hifandray amin'ny lalambe sy tambajotram-pitaterana haingam-pandeha hahatratra an'i Beijing haingana. Araka ny fitantanan-draharaham-panjakana misahana ny fiaramanidina sivily any Sina, dia hitantana mpandeha 720 tapitrisa eo ho eo ny goavambe aziatika amin'ny taona 2020, daty izay antenaina hananganana seranam-piaramanidina 74 na hanitarana. Raha mijery lavitra, amin'ny 2035, seranam-piaramanidina vaovao 216 no hatsangana ao Shina, hahatratra 450 ny fotodrafitrasa amin'ny rivotra.
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Van Don dia notokanana tamin'ny fiandohan'ny taona tany Vietnam, 50 kilometatra miala an'i Ha Long Bay any amin'ny faritanin'i Quang Ninh. Mitentina eo amin'ny 260 tapitrisa euro ny seranam-piaramanidina ary io no seranam-piaramanidina tsy miankina voalohany eto amin'ny firenena, vokatry ny fanamorana ny fampiasam-bola tadiavin'ny governemanta kaominista.
Ireo lalana roa miasa, izay ho lasa dimy amin'ny 2030, dia efa afaka manome antoka ny fivezivezena mpandeha manodidina ny 2.5 tapitrisa. Ny Van Don dia ho ivon-toeran'ny seranam-piaramanidina anatiny Vietnam Airlines sy Viet Jet Air ho an'ny fifandraisana any Azia atsimo atsinanana.
Ny seranam-piaramanidina Ramon dia miasa amin'ity taona ity ary fotodrafitrasa maoderina eo afovoan'ny efitra Negev, 18 kilometatra miala an'i Eilat eo amin'ny Ranomasina Mena.
Ny firafitra mitentina 500 tapitrisa dolara dia mikasa ny hiasa ho mpanolo ny foiben'ny Tel Aviv, seranam-piaramanidina lehibe ao amin'ny firenena. Ny seranam-piaramanidina dia nomena ny anaran'i Ilan Ramon, mpanamory sambondanitra israeliana voalohany, ary natao hanoherana ny mari-pana maripana hatramin'ny 46 degre Celsius. Mpampiasa mpandeha 2 tapitrisa isan-taona ny fahaizany amin'izao fotoana izao, saingy afaka mahazaka hatramin'ny 4.2 tapitrisa amin'ny 2030.
Amin'ny fararanon'ny taona 2019, ny asan'ny seranam-piaramanidina Istanbul vaovao any Torkia, 35 kilometatra miala ny afovoan-tanàna, dia ho vita amin'ny famindrana ireo sidina rehetra atolotry ny seranam-piaramanidina roa Atatürk sy Sabiha Gokcen.
Ny fahatarana sy ny fihemoran'ny rafitra dia nanemotra ny fanokafana voalohany natokana ho an'ny 2018 izay nahemotra tamin'ny fiandohan'ny volana aprily 2019 niaraka tamin'ny fandehanan'ny sidina Turkish Airlines mankany amin'ny seranam-piaramanidina vaovao.
Miaraka amin'ny fahafaha-manana olona 90 tapitrisa voalohany, ny seranam-piaramanidina dia ho afaka hikirakira hetsika 200 tapitrisa mpandeha isan-taona amin'ny fahaizany feno.
Amin'ny faran'ny lalan'ny fivoarany, hanana seranana enina ny seranam-piaramanidina Tiorka vaovao ary hanome fifandraisana amin'ny sidina 350 toeran'izao tontolo izao. "Amin'ny maha ivon'ny fifanakalozana eo amin'i Azia, Eropa ary Moyen Orient, hanatona ireo firenena samy hafa eran'izao tontolo izao izahay," hoy i Kadri Samsunlu, tale jeneralin'ny Iga Airport Operations, ilay orinasa nanangana fotodrafitrasa hatramin'ny 2013 .
Any ankoatry ny ranomasina, misy fanokafana miandry ny seranam-piaramanidina Louis Armstrong any New Orleans, Louisiana, voalahatra amin'ny faran'ny volana Mey. Mitentina 1.3 miliara dolara ny terminal, manana vavahady 35 sy rafitra fanaraha-maso fiarovana miaraka amin'ny fidirana haingana amin'ny fanaraha-maso.
Ny seranam-piaramanidina no ho tobin'ny orinasa 21 miaraka amin'ny fivezivezena mpandeha 13 tapitrisa isan-taona eo ho eo. Any Etazonia ihany koa, ny asa dia hitohy amin'ny fanavaozana ny seranam-piaramanidina La Guardia any New York, iray amin'ireo seranam-piaramanidina misavoritaka sy manahirana indrindra any Amerika.
Ny fandraisana an-tanana ny fanarenana dia kasaina hatao $ 9 miliara, ny ampahany izay efa vita tamin'ny fanokafana ny Terminal B vaovao tamin'ny faran'ny taona lasa.
Amin'ny volana Jolay, any Angletera, hisokatra ny Seranam-piaramanidin'ny Distrikan'i Carlisle Lake, ho an'ny fifamoivoizana isam-paritra ho any Londres, Dublin, ary Belfast. Ny seranam-piaramanidina kely nefa stratejika dia mikendry ny hanome fahafaham-po ny fangatahan'ny mpizahatany ao Cumbria, faritany iray any avaratra-andrefan'ny Angletera izay mandray ny Lake District National Park.
Ity faritra ity dia anisan'ny tsara tarehy indrindra any Angletera ary notsidihin'olona 47 tapitrisa tamin'ny taon-dasa, indrindra ny fivezivezena an-trano, ka niteraka vola mitentina 3.5 miliara euro.
Seranam-piaramanidina eropeana stratejika iray hafa notokanana tamin'ny faran'ny taona 2019 ny seranam-piaramanidina Corvera any Espana mitentina 500 tapitrisa euro, ary mifandray tsara amin'ny tamba-jotra bus.